Umhlaza kunye nokuhambelana kweCapricorn: ♥ Izichaso ziyatsala! - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Umhlaza kunye nokuhambelana kweCapricorn: ♥ Izichaso ziyatsala!
Umhlaza kunye neCapricorn ziboshwe ngokudityaniswa kwazo kwiimpawu kunye namasiko, kodwa ngaba oku kwanele ukwakha ubudlelwane? Fumanisa ukuhambelana kwazo
ICapricorn enamabhongo inikezelwe ngakumbi ekuphakamiseni inqanaba labo lentlalontle kunayo nayiphi na enye into, ngelixa iCancer iyi-100% ezinikele kubomi bosapho. Nangona le miqondiso ibonakala ngathi ayinanto ininzi ifanayo, ukuthanda kwabo imilinganiselo yesintu kuyabahlanganisa kwaye kuyabadibanisa. Ngaba le duo izokwazi ukujonga ngaphaya kokungafani kwabo ukuze bakhe ikamva elihle kunye? Fumanisa inqaku lokuhambelana komhlaza kunye neCapricorn ngolwazi oluthe kratya kulo mdlalo wothando othembisayo.
'Umhlaza kunye neCapricorn ziyayixabisa imilinganiselo yosapho kunye nokuziphatha okuhle!'
Umhlaza kunye nenqaku lokuhambelana neCapricorn: 2/5
Le miqondiso iyancoma: baneentloni ngokufanayo, bangenisa, kwaye banqwenela ukhuseleko. Xa kuziwa ekumameleni, Umhlaza ubonakalisa uthando, ngelixa uCapricorn ethembekile kwiCancer. Nangona kunjalo, iCancer luphawu lokungavuthwa kwaye ubuntu beCapricorn buthathwa njengobudala kulwalamano. Uhlobo olulawulayo lweCapricorn luyonyusa umhlaza, ophendula ngokubanda. Xa izinto zingahambi kakuhle, bobabini umqondiso banokuzibandakanya kukhuphiswano lokucaphuka.
I-aquarius yemihla ngemihla yeenkwenkwezi namhlanje
-Thatha uvavanyo lwethu lokuhambelana nothando lwe-zodiac apha-
Ngaba lo mdlalo ungasebenza?
Umdlalo wothando uxhomekeke kunxibelelwano oluvulekileyo nolunyanisekileyo ukuze uphumelele; ngaphandle konxibelelwano olucacileyo, le duo iyakuhla iye kwiresiphi yokwenyani yentlekele kwaye izinto zinokuphazamiseka. Umonde kunye nokuqonda zezona zitshixo zokuphumelela. Ukuba iCapricorn iyakwazi ukungabandi kangako kumaxesha omhlaza osweleyo, esi sibini sinokucinga ngokuchitha ubomi babo bonke kunye. Ngumbuzo ongaphezulu wokulungisa ulindelo lwabo. Kwelinye icala, inzalelwane yoMhlaza igcwele ubumnandi kunye nemvakalelo yokuthinta iminqweno engafunekiyo ebenza bangenakuphikiswa. Ngenxa yoko, uxolo lwengqondo nonqabiseko zezona zinto zibalulekileyo.
Yintoni enokuba yehle le duo?
Umhlaza luphawu oluthile lobuntwana ngelixa iCapricorn ithathwa ngokuba 'yindoda endala' ye-zodiac. UCapricorn, ocingisisa nzulu kwaye unobulumko, kunokwenzeka ukuba acatshukiswe ngokunzulu kukuziphatha kukaCancer kwaye ngamanye amaxesha kukuziphatha komntwana. Phakathi kwabo, izinto zinokukhawuleza zibe lukhuphiswano lokwenyani!
- Funda nzulu malunga nokungena Iinyani ezili-15 malunga noMhlaza -
Buza kuba njani ubomi babo besini?
Ukuhambelana komhlaza kunye neCapricorn kuswele uthando kwisebe lezesondo. Ukuthozama ngokwendalo nangokufanelekileyo kuya kukukhokelela njenge-duo kwi ubuqhetseba bokwenza inkanuko, isenzo sethenda kunye noxanduva, ubungqina bokuzibophelela, ngaphezu kokubonisa ukungakhathali kweemvakalelo ... ii-caresses zisebenza kuphela ukuthuthuzela iminqweno yentliziyo, kuba umzimba nawo ubanga isabelo sawo solonwabo. Ukuziphatha okungaqhelekanga okanye okukhohlakeleyo akubakhathazi konke konke, ngokuchaseneyo. Ebhedini, le ndawo iyinto eqhelekileyo kwaye ivumela ukuba balibale kancinci kancinci imiqobo yesibini sabo.
Ingcebiso yothando kwesi sibini
Imizamo kufuneka yenziwe kumacala omabini kwaye imiba enzulu ifuna ukwenziwa. Kuya kufuneka ubenjalo evulekileyo ukuba baqonde kwaye bathandane ixesha elide.
USusan Taylor ulungiselele lonke ulwazi oludingayo kubuntu beCancer kwaye ukukhuthaza ukuba ubale uphawu lwakho olukhulayo ukuba awukayazi!
IHermit: Ngaba wanelisekile okwangoku?
Intsingiselo yesi-4 ku-Ukubhula: Yonke into mayibe phantsi koLawulo
zii-capricorn kunye nee-virgos ziyahambelana
ndihlala ndibona inani lama-22
yintoni uphawu lwam olutsha lwe-zodiac
Itshathi yokuhambelana kweenkwenkwezi kweChina
Ingelosi engumgcini ngokuzalwa komhla wokuzalwa
Ngubani ohambelana ne-capricorn